पिसाब फेर्दा सबभन्दा धेरै मज्जा आउँछ:ज्योती मगर - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! पिसाब फेर्दा सबभन्दा धेरै मज्जा आउँछ:ज्योती मगर
ज्योती मगरले पिसाब फेर्दा सबभन्दा धेरै मज्जा आउँछ भन्दा काउलीबुढीले लाजले भुतुक्कै भएकी छिन । बेलाबखत विवादास्पद भिडियो र अन्तरवार्ताका कारण चर्चामा आईरहने मोडल तथा गायिक मगरले विन्दास टिभिमा यस्ते कुरा बोलेकी हुन । नयाँ रमाईलो शो काउलीबुढी शो मा ज्योती मगरले गरेको यो रमाईलो भिडियो हेर्नुहोस: